Dadka Reer Belgium Oo Ka Cadhooday Buurnaanta Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Dalkooda Loo Magacaabay | Hawraar
Dadka Reer Belgium Oo Ka Cadhooday Buurnaanta Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Dalkooda Loo Magacaabay
Dadwaynaha ku dhaqan dalka Belgium ayaa cadho xoog leh ka muujiyay, haweenayda dhawaan loo magacaabay, wasiirka caafimaadka ee dalkaas, oo lagu magacaabo, Maggie De Block, waxaana rayi ururin ku saabsan wasiiradan oo laga sameeyay dalkaasi muujisay in si wayn looga biyo diiday oo dadka rayidka ah ee waddankaas ku nooli diidmo kala hor tageen.
Wasiiradan oo ah qof haweenay ah, dadka ka cadhaysani kuma eedaynayaan, musuq maasuq iyo maamul xumo ay samaysay, balse waxa kaliya oo ay kaga cadhoodeen, muuqaalkeeda gaar ahaan buurnaanteeda iyo miisaankeeda oo boqol iyo todoba iyo labaatan kilo ah.
Wasiiradan ayaa waxa isku raacay rayul caamka guud ee dadwaynaha oo si wayn uga biyo diiday iyo warbaahinta dalkeeda oo iyada lafteedu faalooyin badan oo ay ku naaqishtay, si wayn ugu dhaliishay, waxaana faalooyinka warbaahinta dalkaasi ku dhaliilayso wasiiradan, ay eedayntooda ku sababaynayaan, in Maggie De Block, inay noqonayso wasiirkii ugu buurnaa dunida ee wasiir caafimaad laga dhigo taariikhda.
Waxa kale oo warbaahinta qaarkeed ku eedaysay, in haweenaydan wasiirka caafimaadka laga dhigay, buurnaanteeda marka laga tago, ay ku guul daraysatay inay hilibka iska rido oo miisaanka xad dhaafka ah ee baruurtu ku keentay ay ku guul daraysatay inay iska rido.
Haweenaydan wasiirka looga dhigay wasaarada caafimaadka ee Belgium Maggie De Block, oo iyada lafteedu la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in aanay dheg u jalaq siin doonin, eedaymaha loo soo jeedinayo, isla markaana aanay ku niyad jabayn, waxaanay xustay in sababta wasiirka caafimaadka looga dhigay, aanay xidhiidh la lahayn muuqaalkeeda iyo miisaankeeda midna, balse loogu xulay waayo aragnimadeeda iyo in 25-sano ay ahayd kalkaaliso iyo dhakhtar caafimaad oo dadka u adeegta.